. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: August 2011
အာရုံတွေ စုစည်း မရလို့ပါလို့ အကြောင်းပြရကောင်းမလား .. ဒေါ့ကွန်းကြီးပျက်သွားလို့ပါလို့ ငြီးပြရ ကောင်းမလား .. ခံစားလို့ မရသေးလို့ပါလို့ ဆင်ခြေရှာရမလား .. အချိန်တွေ မအားလို့ အလုပ်တွေ သိပ်ရှုပ်နေလို့ပါလို့ အယူခံဝင်ရ ကောင်းမလား .. လား .. လား .. လား .. :P အဖြစ်သနစ်အမှန်ကတော့ တော်တော်လေးမကပဲ တော်တော်ကြီးကို အပျင်းတစ်လွန်းမက တစ်နေပါတယ် .. စာကြွေးတွေလည်း ထူလွန်းမကထူနေပါပြီ .. အကြောင်းအရာစဉ်းစားလိုက် ချမရေးတော့ မေ့လိုက် .. သတိရတာ ကောက်ခြစ်လိုက် ပို့စ် တို့လို့ တန်းလန်းတွေလည်း draft ထဲမှာ များလွန်းမက များနေပါပြီ .. ဘာတခုမှ သုံးစားလို့ရတဲ့ စာ ထွက် မလာသေးပါဘူး .. :D (အဲလိုပဲ ကိုယ့်ဖာဖာ ချီမွမ်းလိုက်ပါတယ် .. :P)
မိုးခါး ဘယ်ချိန်က ဘလော့ စရေးခဲ့လဲ .. အဲ .. ရက်စွဲတွေ မေ့နေတလိုလို .. ဘလော့ကိုရော ဘယ်ချိန်က စဖွင့်ခဲ့တာလဲ .. အဲ .. ခဏ ခဏ ပို့ အဟောင်းဆုံးတွေ ရှာကြည့်လိုက်ဦးမယ် .. :P
အချိန်ကာလ အားဖြင့် ၂၀၀၈ မတ်လ ၁ ရက်နေ့ .. အဲနေ့က စာ စရေးဖြစ်တာလား .. ဟုတ်ပါဘူး .. စလုံးစရောက်တယ် ပြောမလို့ .. :P
ဟုတ်ကဲ့ မျက်နှာပိုးသတ်ပြီး ပြောင်ချော်ချော်ဆက်ရေးပါတော့မယ် .. :P
ကဲပါလေ အတည်မဟုတ်တဲ့ မိုးခါး အတည်ပေါက် ရေးပါတော့မယ် ..း)
မိုးခါး ဘလော့နဲ့ပတ်သက်ပြီး နစ်ခ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း တခြားပို့စ်တွေမှာ ရေးဘူးပါသေးတယ် .. ခုတော့ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းတော့ ဗားရှင်း ပြောင်းရေးရတာပေါ့နော် ..း)
မိုးခါး စလုံးကိုရောက်ပြီး အလုပ်မှာ အထိုင်ကျတော့ (အလုပ်စားပွဲပေါ်မှာ ကွန်ပျူတာ .. အဲ့ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ထိုင်ရင်း ဘလော့ဂင်းတာကို မြင်ယောင်ကြပါကုန် ..) ဗညားရှိန်(တနည်း)လင်းခေတ်ဒီနို(တနည်း)ဆက်ပိုင်(တနည်း)သက်ခိုင် ဟူး မောပ .. အဲ့ကောင် အဲ့ကောင် .. သူမိတ်ဆက်ပေးလို့ စုဗူးကို စသိခဲ့ပါတယ် .. အဲဒါနဲ့ သူများစာရေးတာမြင်တော့ ကိုယ်လည်း တင်ချင်တာပေါ့နော် .. အဲလိုနဲ့ မနိုင်နိုင်း စာတွေ ကူးတင်ရင်း (လင့်ထည့်ပေးတယ်နော် .. ကွန်ပလိန်း မတက်နဲ့) မေသဲဆိုပြီး စာ စရေးဖြစ်ပါတယ် .. နောက်ပိုင်းတော့ စမ်းရေး စမ်းရေးရင်း ရေးဖြစ်လာပါတယ် .. စုဗူးမှာ သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေရခဲ့သလို ပျော်လည်းပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေပါပဲ .. အဲဒီတုန်းက တယောက် စာအသစ်တက်ရင် တခါသွား အားပေး .. ကိုယ်လည်း တင်လိုက်တာနဲ့ လာအားပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ များမှ များပါပဲ .. အဲဒီထဲက ခုချိန်ထိ ခင်မင်နေသေးသူတွေ စာရေးကောင်းလို့ အမှတ်ရနေမိသူတွေ ခင်မင်တယ်လို့ ထင်မိပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကွဲကွာသွားသူတွေ အားလုံးကို သတိရနေမိပါတယ် .. တချို့လည်း အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ခင်ခွင့်ရသလို တချို့ကျတော့ ခုထိ အွန်လိုင်းမှာ အဆက်အသွယ် မပြတ် .. နာမည်တွေတော့ ချမရေးတော့ပါဘူး .. (စတေးရှောင်တာ .. ကျန်ခဲ့ရင် ထောင်းခံရမှာစိုးလို့ .. :P) ဒီလိုနဲ့ နောက်ပိုင်း နဲနဲကြာတော့ ကိုယ့်စာလေးတွေလဲ နဲနဲများလာတော့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ လုပ်နည်းလေးလည်း သိလာတော့ ကိုယ့်အိမ်လေးနဲ့ ကိုယ် နေချင်စိတ်ဖြစ်ပြီး ဘလော့ စပေါ့လေး လုပ်ဖြစ်ပါတယ် .. အဲလို ကိုယ်ပိုင် စာမျက်နှာလေး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် .. နာမည်ကိုလဲ မေသဲကို မကြိုက်တော့ပဲ မိုးခါးလို့ ပြောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ..
ကျမတို့ စာ စရေးတဲ့ အချိန်က ဘလော့ လောကကြီးက အတော်ကို ပျော်စရာ ကောင်းခဲ့ပါတယ် .. စာရေးသူတွေ အရမ်းမများသေးသလို ဆိုရှယ်ဆိုက်တွေလည်း မပေါ်သေးပါဘူး .. တယောက်အိမ် တယောက်သွား ပြောကြ ဆိုကြ .. ဒီကနေ တဆင့် မေးလိပ်စာတွေပေးကြ .. ပိုမိုပြီး ခင်မင်လာကြ .. တယောက် အားငယ်ရင် တယောက်က အားပေးကြ .. တယောက် ပျော်ရင် အားလုံးက ၀ိုင်းပျော်ကြနဲ့ပါ .. (အမှန်တိုင်းပြောရရင်လည်း တခြား ဆိုရှယ်ဆိုက်တွေ ဘယ်လောက် များများ ဘလော့လေးလောက်ကို သံယောဇဉ်မဖြစ်မိပါဘူး ..) ဘလော့ကနေ ခင်မင်ရတဲ့ ခုထိလည်း ခင်မင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းအများစုဟာလဲ အရေးကြုံရင် နီးစပ်နေဆဲပဲလို့ ယုံကြည်နေပါသေးတယ် .. ကျမ ဘလော့လေးကတဆင့် ခင်မင်ခဲ့ရသူတွေ စလုံးမှာတင် တော်တော်များပါတယ် .. တချို့လည်း တခြားနေရာတွေ ရောက် .. တချို့လည်း ဘလော့မရေးဖြစ်တော့တဲ့ သူတွေ .. အားလုံးကိုလည်း အမှတ်ရနေမိပါတယ် .. ကျမရဲ့ ပထမဆုံး စလုံးက မွေးနေ့ပွဲဟာ ဘလော့ဂါတွေနဲ့ စတင်ခဲ့တာပါ .. နောက်နှစ်တွေလည်း (ခုထိ) အဲဒီ ဘလော့ဂါ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါပဲ .. မမေ့နိုင်တဲ့ ပြန်မရတော့တဲ့ ပွဲတွေများစွာကိုလဲ ကျမတို့ တူတူဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ် .. နေ့ပေါင်းများစွာ ညနေခင်းပေါင်းများစွာ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ ၀င်လာတခါ ထွက်လာတလှည့်နဲ့ ရှိခဲ့တဲ့ အတိတ်တွေလည်း တနင့်တပိုးပါ .. အဲဒီတုန်းက ပုံတွေ ကြည့်မိရင် တကယ်ကိုပဲ လွမ်းဆွတ်ခံစားမိပါတယ် .. ဒါတွေဟာ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ အတိတ် စစ်စစ်တွေပါ .. ဒီလိုလွမ်းဆွတ်စရာ အတိတ်တွေရှိခဲ့တာဟာ ကံကောင်းခြင်းလို့ ကျမ မှတ်ယူပါတယ် .. ဒီလိုပဲ နောက်လည်း ဆုံကြဦးမယ် .. ကွဲကြဦးမယ် .. သိထားရင် ကျမတို့ ဆုံတွေ့ချိန်မှာ ပျော်ရွှင်စွာ နေရင်း ခွဲခွာချိန်မှာလဲ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် လမ်းခွဲနှုတ်ဆက်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်မိပါတယ် ..
အဲ .. ကျမရဲ့ တော့ပစ်ကတော့ လွဲနေပြီ ထင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပဲ ချရေးလိုက်ပါတယ် ..း)
အားလုံး ပြုံးရွှင်စွာ လမ်းခွဲနိုင်ပါစေ .. ဟန်ဆောင်ပြုံးတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့နော် ..း)
လမ်းခုလတ်မှာ တခဏ ဆုံတယ်
တချိန် သေချာ ခွဲရမယ် ..
ငါတို့ရှေ့က လူတွေ ဒီလိုပဲ တွေ့ဆုံကြုံကွဲ ခဲ့တယ်
နောက်လူတွေ ဒီလိုပဲ ဖြစ်လိမ့်ဦးမယ်
မာန .. အရေးမကြီးဘူး ခွာချ
အာဃာတ .. မထားသင့်ဘူး ဒါက ..
လူတွေ များစွာထဲကမှာ ငါတို့လာဆုံတွေ့ရတာတွေကို
ငါတို့ တနေ့ခွဲရမယ် ဆိုတာတွေကို ..
ဒီလိုဆို ငါတို့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ပျော်နိုင်မယ်
အမုန်း အလွမ်းတွေ မေ့နိုင်မယ်
ဒဏ်ရာ အနာတရတွေ နည်းနိုင်တယ်
ပျော်ရွှင်ခြင်း အစစ်နဲ့ ပျော်နိုင်မယ်
လိုအပ်ချက်တွေ ကိုယ်စီရှာဖွေ ဖြည့်တင်းမယ်
တဦးလိုရင် တဦး ရှိနေပေးမယ်
လက်ပြချိန်မှာ အပြုံးတပွင့်တော့ ပန်ဆင်ထားလိုက်ပါ ..
လိုအပ်ရင် လက်တွေ ကမ်းလိုက်ပါ
လိုအပ်ချိန်မှာ ဖြည့်ဆည်းပေးခွင့် ကိုယ်စီ ရှိနေပါတယ် ..
ရေးသားသူ မိုးခါး at 8/30/2011 01:31:00 AM 20 comments:
အကြောင်းအရာခွဲ tag game, ခံစားချက်
အလွှာပါးလေးတွေ ကြားမှာ ငါတို့ နေထိုင်ကြတယ်
ပြုစု ထိန်းသိမ်းနိုင်သလို ဖျက်စီး ဖျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်တယ်
မမြင်ချင်ရင် ကျောခိုင်းထားနိုင်သလို ပြန်ဆုံချင်ရင် တချက်လေးလှည့်ကြည့်လိုက်ရုံပါပဲ ..။
အမှတ်တမဲ့နဲ့ အမှတ်ရစရာတွေ များတယ်
နေ့လည်နေ့ခင်းနဲ့ နံနက်စောစောတွေ ..။
ခြေရာနဲ့ အငွေ့အသက် မရှိပေမယ့်
ကမ်းခြေရောက်တိုင်း ပုံရိပ်တွေ ရှိတယ်
တကယ့် အတိတ်စစ်စစ်တွေ ရှိတယ် ..။
ငါတို့ ရှင်သန်ချိန်တွေ သိပ်ရှည်လျားလွန်းသလား
တကယ်တော့ အချိန်တွေ သိပ်မြန်နေခဲ့တယ်
ငါတို့ ရှင်သန်ချိန်တွေ သိပ်ရှည်တယ် ထင်နေတုန်းပဲ
ဒါပေမယ့် တခါတခါ မျက်တောင်တချက်ခတ်လိုက်ဖို့ တွေးပူပန်နေတယ် ..။
စိတ်ကူးတွေ လွဲမှား မစဉ်းစားသင့်တာကို စဉ်းစားတယ်
သတိတွေ လက်လွတ် မမေ့သင့်တာကို မေ့ထားမိတယ်
အတွေးတွေ ချော်လဲ အချိန်တွေ သိပ်အများကြီးလို့ ထင်နေမိတယ်
အတွက်အချက်တွေမှား နောက်နေ့တွေ အများကြီးလို့ ယုံကြည်နေသေးတယ် ..။
တပတ် ပြန်လည်လာခဲ့တယ် ..။
စိတ်ကူးတွေ လွဲနေတုန်းပဲ ..။
ရေးသားသူ မိုးခါး at 8/06/2011 01:24:00 AM5comments: